I-Fighweight Backpack Cooleler i-Inser, i-24 ye-cans enkulu ye-CB013 | Zone
I-Fighweight Backpack Cooleler i-Inser, i-24 ye-cans enkulu ye-CB013
Iingxowa ze-colorting ezikhutshelweyo
I-600d NYLOLO LOLOLO Ilaphu, Ifilimu ye-aluminium + Eva
N.W: 0.6kg G.W: 1.4kg
ukuloba, uhambo, nepikiniki
1.Ukusebenza: Ingxowa yethu yokupholisa inokubamba ukuya kwiilitha ezingama-23, ungathatha i-24cans ye-24 yeziselo zakho ozithandayo kunye ne-ices. Imilinganiselo iyonke imalunga ne-29x 20.5 x 39cm (l x w x h).
4. Deaker Deaker& Ipokotho ezininzi: Ixhotywe ngepokotho eyi-1 ebanzi, iipokotho ezi-2, kunye neepokotho ezi-1 zangaphambili, iipokotho ezininzi zinokufezekisa iimfuno zokugcina izinto ezahlukeneyo. Ingasetyenziselwa ibhegi yakho ye-Duffel.
5.Umgangatho ophezulu we-zipper kulula ukutsala kakuhle kwaye uyilo lwayo lukwanjalo
I-6 ye-egxedy yamagxa kunye ne-ergonomic yoyilo ngamacandelo afakelweyo ngasemva kwintuthuzelo kunye nokuthamba. Ingalungiswa nemithwalo, izandla zasimahla.